Uhlalutyo lweMidlalo yeGran Turismo, ukubuyela kwimvelaphi yePolyphony | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | | Ikhaya, Videogames
UGran Turismo I-saga ebihamba nesaga elungileyo yabadlali ngaphezulu kweminyaka engamashumi amabini. Sithetha ukuba ushicilelo lokuqala nolonwabisayo lukaGran Turismo lufikile kwi-PlayStation yoqobo, lusishiya nemilomo yethu ivulekile kwinto enokuba yenye yeemodeli zokuqala ezenza ukusebenza kwe-3D.
Kwiintsuku ezimbalwa, kungenzeki njani ukuba kungenjalo, Kudala sivavanya idemo yeGran Turismo Sport ethi iqela lakwaSony libonelele ngesisa kubo bonke abasebenzisi bayo, kwaye le ibikukuqala kwethu ukubonwa.
Eyona nto imbi kakhulu malunga nedemo ngaphandle kwamathandabuzo kukuba sikwazile ukuyisebenzisa iintsuku ezintlanu, eyona nto ilungileyo kukuba Nge-18 ezayo ye-Okthobha siya kuba nakho ukonwabela umdlalo abo bethu bakhethe ukuyifumana. Kucacile ukuba sizifumene sijongana nokuphuculwa kwemizobo enokulindelwa kwimveliso eyilwe ngu kwaye sifumane okuninzi kwi-PlayStation 4 Pro, nangona oku kungaphazamisi uguqulelo lwe-PlayStation 4 olujongeka lukhulu.
Mhlawumbi into engalunganga ibikukuba kufuneka sikhethe ixesha losuku ukuba sibaleke, singavelisi utshintsho olunamandla kwimozulu. Phakathi kweendlela zemidlalo i-arcade eye yema ngaphandle, nangona ngokunyaniseka kolu hlobo lomsebenzi akufuneki ukuba uye kwisihloko kunye nophuhliso olubalulekileyo nolwenziweyo njengoGran Turismo, ke siyacebisa ukuba ufuna ukubaleka ungangxibi ubuninzi beemvakalelo uGran Turismo Sport azilungiselele zona, eyona nto intle kukuba ukhetha isihloko esivela kwi-Saga yeSidingo, engabonakalisi kude kangako. Inyani yile yokuba iGran Turismo Sport izakusenzela imvakalelo yokwenene kwimowudi yayo yokulinganisa.
Usishiye nobusi emilebeni yethu
Inyani yile yokuba inyani yoluhlu olufutshane lweemoto (ngokubhekisele kwimidlalo efana neForza Motorsports okanye nolunye udidi lweGran Turismo) inokusishiya sinencasa embi emilonyeni yethu. Nangona kunjalo, kubonakala ngathi kunokwanele, kwaye Asikwazi ukubonisa ukuba iPolyphony ivula indlela yentlawulo ye-DLCs xa isandisa igaraji yayo.
Sibe nethamsanqa ngokwaneleyo ukuba sizame uhlelo lwenyani lwenyani, le yeyona yona ithathe elona candelo libi. Ngaphandle kokuziva kuphezulu, inyani kukuba umgangatho wegraphic kunye nokuqhuba okungaphezulu kokuncediswa kuphazamisa indlela esisebenzisa ngayo uvakalelo lokudlala, yiyo loo nto ndikholelwa ngokunyanisekileyo ukuba yeyona ndlela ilungileyo yokonwabela iMidlalo yeGran Turismo phambi komabonakude olungileyo, kangangokuba abaphuhlisi bePolyphony Digital bakhethe le ndlela yokufumana umdlalo kunye neconsole. Asitsho ukuba uguqulelo lwenyani eyiyo ayinamdla, kodwa ngokuqinisekileyo ikude kakhulu kuhlobo olusinika lona ngendlela yoqobo.
Ngokucacileyo IGran Turismo Sport ijolise kwimowudi yabadlali abaninzi, kakhulu kangangokuba inatywina elisemthethweni le-FIA akukho nto ingako kwaye akukho nto iphantsi. Nangona kunjalo, kwidemo siye safumana ubunzima obukhulu bengozi kunye nezinye iintlobo zeemfuno ezisinyanzele ukuba siyeke ukucofa le mowudi yomdlalo, ke ndingathanda ukungalinganiseli eli candelo de silivavanye ngakumbi. Sicinga ukuba u-Sony uthathela ingqalelo eli xabiso lokuphazamiseka kunye neengxaki zeseva, kuba nangona le ingeyiyo iFIFA okanye i-CoD, inyani kukuba imeko echanekileyo yeeseva iya kugqiba indlela esisebenzisa ngayo inguqulelo yabo ekwi-Intanethi.
I-off-piste iGran Turismo Sport ibonelela ngenani elingenasiphelo leeparameter ke kuyakufuneka utyale ixesha lakho elininzi kungekuphela ekwenzeni izithuthi ngokwezifiso, kodwa nasekufumaneni ubunjineli obulungele wena.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Uhlalutyo lweMidlalo yeGran Turismo, ukubuyela kwimvelaphi yePolyphony